आधा कभर न्युज – NepalNewsTv | The Daily Star of Nepal
श्वेता खड्कालाई ५ करोडको बात !
२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भुइँचालोले सिन्धुपाल्चोकको चौतारा साँगाचोकगढी–१४ स्थित इन्द्रावती नदी किनाराको माझी बस्ती भीमटार भताभुंग भयो । ५३ घरधुरी टहरामा आश्रय लिन बाध्य भयो । भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट…
अब युवाहरु मासुभात, मोटरसाइकल पेट्रोलमा नअल्झिने !
काठमाण्डौ । संसद् पुनःस्थापनाका पक्षमा उभिन एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले सबैसँंग आग्रह गरेका छन् । नेपाल प्रेस सोसाइटी र संकल्प क्रियसनले वर्तमान राजनीतिक संकट र युवाहरूको भूमिका विषयमा शनिबार भक्तपुरमा गरेको…
काठमाडों । ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रमका प्रस्तोता रवि लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजन छाडेको घोषणा गरेका छन्। बुधबार साँझ सामाजिक सञ्जालमा एक स्टाटस लेख्दै लामिछानेले भोलि प्रसारण हुने कार्यक्रमनै न्युज २४…
मेलम्ची खानेपानी आयोजनाः पानी आउने टुंगो छैन वितरण गर्ने हतारो
काठमाडौं । काठमाडौँ उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउन पुनः परीक्षण गर्ने तयारी भइरहँदा पानी वितरणका लागि आवश्यक तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पानी पुनः परीक्षणको तयारी…
काठमाडौं । गे्रगोरियन पात्रो अनुसार आजदेखि नयाँ वर्ष इस्वी सन् २०२१ शुरु भएकाे छ । जिजस क्राइस्टलाई फाँसी दिएपछि इस्वी सन्को सुरुवात् भएको भन्ने भनाइ रहेको छ । पोप गे्रगोरीले…
‘स्वदेशमै केही गरौं भन्नेलाई पनि महामारीले विदेश जान बाध्य बनायो’
काठमाडौं। सर्लाही लालबन्दीका रामलखन यादव तीन दिन भयो काठमाडौंमा बसेको। यस्तो महामारीको समयमा सर्लाहीबाट काठमाडौं आउनु उनको रहर होइन। बाध्यताले उनी काठमाडौंमा तीन दिनदेखि बसिरहेका छन्। कोरोना महामारी कारण बेरोजगार बनेपछि…
कोरोनाको डर छैन, कुनवेला लाग्छ भर छैन
हिमाली जिल्ला सोलुखुम्बुमा अधिकांश मानिस मास्क लगाउँदैनन्, तर बाहिरबाट आउनेलाई ‘नो मास्क, नो इन्ट्री’ नीति लागू सोलुखुम्बुको थुलुङ दूधकोसी गाउँपालिकाअन्तर्गत लोखिम निवासी निमा तामाङ स्याङ्बो सोलु–खोटाङको सिमाना देउराली भन्ज्याङमा भेटिए…
सूर्य थापाले प्रचण्डलाई कडा शव्दमा निन्दा गरे !
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रचण्डको कडा शव्दमा निन्दा गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा थापा लेख्छन् “अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी सचिवालयमा एकल रूपमा मनोमानीपूर्ण ढंगले बाँडेको अराजनीतिक प्रस्ताव स्वयंमा…